Indonezia: Lehilahy Masina Mpampirafy ary Fahafahambaraka Nanjo ny Depiote Iray Amin’ny Resaka Firaisana Ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2018 12:14 GMT
Tsy misy zavatra tena mahavery hevitra noho ny resaka eo amin'ny tontolon'ny blaogy Indoneziana nandritra izay herinandro vitsy lasa izay. Miresaka mikasika tranga roa toa mitovy fa nefa tsy mifandray : ny vady faharoa an'i Aa Gym sy ny fahafahambaraka nanjo ny depiote Indoneziana iray avy ao amin'ny Antoko Golkar noho ny resaka firaisana ara-nofo.
Voalohany, ho an'ireo tsy Indoneziana, ity misy fampidirana avy amin'ny gazetiboky TIME mikasika an'i Aa Gym, nantsoina hoe ny ”Mitory fifangaroana fetsifetsy eo amin'ny fitiavam-bavaka sy fahombiazana ilay Miozolomana malaza indrindra ao Indonezia.”
Noho izany, monina miaraka amin'ny vady roa izao ilay Lehilahy Masina malaza indrindra. Ary izany no niteraka ny adihevitra teo anivon'ny tontolon'ny blaogy Indoneziana mikasika ny mahamety na tsia ny hetsika toy izany. Azo atao ao anatin'ny finoana Silamo ny manana vady mihoatra ny iray saingy tsy amporisihana ny fanaovana azy. Afaka manao izany ihany ianao rehefa (1) afaka manao ny rariny amin'izy ireo (vady) ary / na (2) tsy mampirafy ivelan'ny fanambadiana (zina amin'ny teny Silamo) izay iray amin'ny fahotana lehibe indrindra ho an'ny finoana Silamo.
Rahefa izany, mihevitra ireo Miozolomana tsotra fa tokony hitoetra ho ohatra mendrika ho an'ireo mpino azy mihoatra noho ny hafa ny Miozolomana mpananatra hajaina toa azy izay manana mpanaraka an-tapitrisany, anatin'izany ity tranga ity, mba tsy hanana vady roa.
Milaza i Ridho Putradi, mitanisa andininy iray avy ao amin'ny Korany izay matetika ampiasan'ireo vady mpandala ny polygamia (fanànana vady mihoatra ny iray) fa ”na inona na inona antony, tsy miombon-kevitra amin'ny fiainana mampirafy aho.” Misy fanehoankevitra 49 (sy fitanisàna) ao amin'ny lahatsorany mikasika ny polygamia-n'i Aa Gym, izay ny ankamaroany dia manohana fatratra ny heviny miaraka amin'ny antony maro samihafa. Maro hafa koa ny hevitra sahala amin'izany navoakan'ny blaogera maro toa an'i Rohprimardho, Tata Danamihardja, Morning Dew, Ida Abidin, Agus Setiawan, Rani.
Na izany aza, tsy manana olana amin'izany i Muhammad Solihuddin, ary mirary vintana tsara ho an'i Aa Gym sy fahasambarana ho azy roa ireo.
Fahafahambaraka nanjo ny Depiote iray noho ny resaka firaisana Ara-nofo
Mandritra izany fotoana izany, mameno ny vaovao noho ny antony tena tsy mety sady vendrana be i Yahya Zaini, Depiote Indoneziana avy amin'ny Antoko Golkar: ny fahafahambarakany noho ny firaisana ara-nofo niaraka tamin'ny mpihira iray noraketina tamin'ny sy nivoaka avy tao amin'ny findain'ilay vehivavy mpihira ka niparitaka toy ny otrikaretina teny anivon'ireo Indoneziana mpampiasa finday ary resahin'ny blaogera Indoneziana ankehitriny. Manery azy hiala amin'ny maha-depiote azy izany tranga izany ary mety ho voaroaka ihany koa izy tsy ho ao amin'ny Antoko Golkar izay tarihin'i Jusuf Kalla (pron, Yusuf Kala), ilay filohan'i Indonezia amin'izao fotoana izao,. Somary mampihomehy, lehiben'ny kaomitin'ny raharaham-piangonana ao amin'ny Golkar i Yahya Zaini (izay tomponandraikitra amin'ny resaka fitondrantena!!).